जबज र पार्टीको भागबन्डामा यति सम्म हास्यास्पद कारण के होला? तपाई नै जबजको हत्यारा « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
जबज र पार्टीको भागबन्डामा यति सम्म हास्यास्पद कारण के होला? तपाई नै जबजको हत्यारा
कमल बिक्रम जि सी January 14, 2021 मा प्रकाशित
माघ १,काठमाण्डाैं । राजनीतिक अस्थिरता अझै कायम भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नेगरी पाँच वर्षे म्याण्डेट पाएको नेकपा सरकारले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद विघटन गरिदियो । पार्टी कलह बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्ततः संसद् नै विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भयो । निर्वाचन आयोगको वैधानिकता कुरिरहेका दुवै समूहका नेताहरू यतिखेर देश दौडाहामा छन् ।
संघीयता विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अवस्था हो । मदन भण्डारीले परिकल्पना गरेको स्थानीय निकाय संघीय संरचनाकै जग थियो । नेतृत्व चयन तथा प्रशासन, न्याय सम्पादन, समृद्धि लगायतका निर्णय स्वयम् जनताले गर्न सक्ने राज्यव्यवस्था हुनेछ भन्नुको तात्पर्य संघीयता नै हो, जनताप्रतिको विश्वास र जनवाद हो ।
अहिलेको संविधानले समानुपातिक समावेशी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रणाली (आरक्षण लगायत) बारे स्पष्ट नलेखिए पनि त्यसको मूल मर्म बलियोगरी पक्रेको छ । समानता एवम् सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजिवीहरु, निम्न आय भएका गरीबहरू तथा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको अग्रणी भूमिका रहनेछ ।
कम्युनिष्टहरूले अनेक नामका जनवादलाई मार्गदर्शन मानिरहेको सन्दर्भमा मदन भण्डारीले प्रतिस्पर्धा पनि जनताको जनवाद स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर जबज अगाडि बढाए । त्यही मार्गदर्शनअनुसार, एमाले २०४८ यता र २०६४ पछि माओवादी निर्वाचनमा भाग लिँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल छ । जबजले अगाडि बढाएको यस्ता अनेक कार्यक्रममध्ये अधिकांश वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।